Vaovao - Ny mpitarika ny lamaody sy ny tongotra dia mangataka tari-dàlana ho an'ny masontsivana ho an'ny tarehimarika amin'ny endrika "COVID-19"
Ny mpitarika ny lamaody sy ny kiraro dia miantso toro-marika amin'ny endrika masontsivana ho an'ny tarehimarika amin'ny endrika COVID-19
Ny mpitondra ny indostrian'ny lamaody sy ny dian-tongotra dia miantso ny governemanta hampihatra ny torolàlana "tsy miova" ho an'ny fampiasana saron-tava ho an'ny marika amin'ny tsimokaretina Corona.
Ao anatin'ny taratasy iray natolotry ny filoha Donald Trump, ny American Apparel and Footwear Association - izay misolo tena ny orinasa mihoatra ny 1 000 manerana an'i Etazonia - dia nanentana ny mpitantana hametraka fehezam-bidy federaly hanoloana masika mifanampy amin'ny ezaka ataon'ireo mpivarotra mba hamoha indray ny fivarotana ho an'ny daholobe.
"Rehefa miditra amin'ny sehatra manaraka ny valin-tenantsika sy ny fanarenana ny COVID-19 isika dia miatrika safidy mahatalanjona," hoy ny filoha sy ny CEO Steve Lamar. "Raha tsy mitaky fampiasana saron-tava marobe any amin'ireo toerana azon'ny besinimaro izahay, dia mety hiaritra fanakatonana varotra miharihary bebe kokoa."
Ireo andinin-tsoratra avy amin'ny taratasy dia nalefa tany amin'ireo lehiben'ny Fikambanan'ny Governemanta Nasionaly, ny National Association of Counties ary ny US Conference of Mayors. Ny AAFA dia nangataka ihany koa ny sampandraharahan'ny fiarovana ny fanatanjahantena momba ny fiarovana an-trano sy ny fotodrafitrasa fiarovana ny fotodrafitrasa momba ny fiarovana ny tanindrazana mba hijerena ny fanavaozana ny fotokevitra manan-danja ho an'ny asa fanaovan-tsoa ho an'ny mpiasa. sy ny mpanjifa.
"Ny fisondrotaly farany teo sy tranga maro ny onjan'ny onja faharoa tamin'ny fararano dia manondro fa ny valan'aretina covid-19 dia ho ampahany amin'ny fiainana mahazatra mandritra ny fotoana kelikely." Lamar nanoratana. "Satria fantatsika izany, ary tsy misy izany fanazavana izany, ny governemanta any an-toerana dia mety handika ny torolàlana CISA hamerenana indray ny fanakatonana miompana amin'ny orinasam-pifandraisana izay tsy vitan'ny famolavolana ny fitondran-tena mahamora ny fiaraha-monina, fa izay manohana ny fahaizan'ny mpanjifa ihany koa."
Nalefa ny ampitson'io taratasy io taorian'ny nandefasantsika ny firaketana hafa ho an'ny areti-mifindra covid-19 - fahenina ao anatin'ny 10 andro monja. Notaterina tamin'ny raharaha 59880 ny mpiasam-panjakana tamin'ny alakamisy, ary notarihin'ny fanjakana maro izay anisan'ireo voalohany namaha ny famerana fanidy. Hatramin'ny anio, mihoatra ny 3,14 tapitrisa ny olona ao amin'ny firenena no narary ary farafahakeliny 133.500 no maty.
Araka ny ivon'ny fifehezana sy ny fisorohana ny aretina, ny cornovirus dia miparitaka indrindra amin'ny olona amin'ny alàlan'ny fantsom-bavony. Ity dia nanoro hevitra ny fampiasana saron-tava amin'ny toerana ho an'ny daholobe sy ireo manodidina ny olona tsy miaina ao an-tokantranony, indrindra rehefa sarotra ny fepetra ara-tsosialy hafa.